Beddel ee US Department of Adeegyada Socdaalka iyo Dhalashada:hab cusub oo si bixiyayaasha ee magangelyo siyaasadeed ee codsiyada 2018 In Maraykanka | USAHello | USAHello
<span lang ="ar">Beddel ee US Department of Adeegyada Socdaalka iyo Dhalashada:hab cusub oo si bixiyayaasha ee magangelyo siyaasadeed ee codsiyada 2018 In Maraykanka</taako>
Waxaa jira hab cusub oo si magangelyo sanad Aljawoualssayas 2018 In Maraykanka.
hab cusub oo si ay magangelyo sanad Aljawoualssayas 2018 In Maraykanka.
In 2018, waxaa jira ah oo ku saabsan 300,000 oo qof sugaya in ay dhegeystaan ​​magangelyo codsiyada United States. Waqti ayey qaadan doontaa waqti dheer si wax looga qabto dhammaan codsiyada kuwa oo waraysi dhammaan codsadayaasha.
Si wax looga qabto dhibaatada, Socdaalka Mareykanka iyo Waaxda Adeegyada Citizenship Bngaramlatha Waayo, waraysiyo lala yeeshay dadka magangalyo doonka ah ee 2018. waa Qabataa wareysiyo la codsadayaasha cusub ugu horeysay oo ku shaqeeya liiska si cagsi ah. Tani waa hab cusub:
mudnaanta koowaad: Codsiyada in la qorsheeyay wareysi, laakiin lahaa in la dib-u-wareysi jadwalka codsiga codsadaha ama baahida xiiso u Department of Immigration and Citizenship bixiyaha Adeegyada American.
mudnaanta labaad: Codsiyada in laga joojiyay 21 Maalmood ama ka yar.
mudnaanta saddexaad: aqoonsado doonaa dhammaan codsiyada magangelyo iyo positive kale u fiican waraysiyada, laga bilaabo faylasha cusub iyo waqti kale oo shaqada on files ka weyn.
Waa maxay sababta Waaxda Adeegyada Socdaalka sameeyay Dhalashada Maraykanka iyo isbedelka this?
Haddii aad soo gudbiso codsi magangalyo siyaasadeed, waxa aad codsan kartaa ogolaansho shaqo ah ka dib 150 maalin maalmaha ka mid. Markaas waxaad ka shaqayn kartaa ilaa aad la aqbalo ama aad diido. Waaxda Adeegyada Socdaalka ayaa sheegay Dhalashada Maraykanka iyo in nidaamka cusub ee hoos u dhigi doontaa tirada codsadeyaasha magangelyo siyaasadeed oo kaliya si aad u hesho ogolaanshaha shaqada. Haddii aad la tacaalayso codsadayaasha cusub oo markii ugu horeysay ka Sokow sugaya sano, ayaa aaminsan in Waaxda Adeegyada Socdaalka iyo dhalashada Mareykanka ay u badan tahay in ay ma joogo laakiin waxay leeyihiin xaalad wanaagsan. Tan waxa u sabab sababta oo ah in marka bixiyeyaasha diiday codsiyada magangelyo doonka, waxaa suurtagal ah si ay uga Mareykanka soo saarto.
Maxaa dhacaya haddii aad sugaysid in waraysiga, iyo arrimo degdeg ah?
Waaxda Adeegyada Socdaalka sheegay Dhalashada Maraykanka oo tixgelin doonaan, oo ku saleysan kiis kasta oo shakhsi ah, codsi degdeg ah go'aamiso jadwalka waraysi ka baxsan si ay mudnaanta ee kor ku xusan ee. Fadlan wixii jadwalka si degdeg ah wareysi uu qoraal ahaan Office of codsiyada magangelyo siyaasadeed Your. Tag bogga Xafiisyada gaar ah iyo US Waaxda Adeegyada Socdaalka iyo Dhalashada Wixii macluumaad ah la xiriir.
bixiyeyaasha qaarkood waxay sugaan ilaa iyo afar sano si loo helo ogolaansho si ay u carruurtooda ama haweenkooduba waxay keeni kartaa in ay iyaga ku biiraan magangelyo siyaasadeed. Waxa ay noqon doontaa mid aad u adag, waayo, iyaga oo haysta in ay sugaan muddo dheer. Oo ku baaqay in difaacayaasha xuquuqda aadanaha Immigration Services Department iyo dhalashada US habka cadaalad ah codsadayaasha kuwa. Haddii aadan hore u la qareen ka shaqeeya, waxaan ku talinaynaa in loo helo qareen si uu kaaga caawiyo.
Baro badan oo ku saabsan Sida loo codsado magangelyo siyaasadeed